MWC 2018 မှာမိတ်ဆက်ဖို့မျှော်လင့်ထားလို့ရတဲ့ စမတ်ဖုန်းအသစ်အချို့ – AsiaApps
ကမ္ဘာ့အကြီးကျယ်ဆုံး စမတ်ဖုန်းမိတ်ဆက်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ MWC (Mobile World Congress) 2018 ကိုတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းနားဆုံးပွဲတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကလည်း မိမိရဲ့ ဖုန်းအသစ်စက်စက်၊ နည်းပညာအသစ်စက်စက်လေးတွေကို တစ်ဉီးနဲ့ တစ်ဉီးအပြိုင်အဆိုင် မိတ်ဆက်ချင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ article မှာတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ MWC မှာမြင်တွေ့ရမယ့် စမတ်ဖုန်းအသစ်တွေထဲက အချို့ကို Highlight လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Galaxy S9 နဲ့ S9+ တို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကျော်လောက်ကတည်းက MWC မှာတွေ့မြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း သတင်းတွေထွက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလအစပိုင်လောက်မှာတော့ ဒီဇိုင်းကာလနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး လ အလယ်ပိုင်းလောက်မှာတော့ S9 နဲ့ S9+ တို့ရဲ့ Teaser video လေးတွေထွက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ (ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့ လန်းနေပေမယ့် S8 တုန်းကနေနဲ့ဆင်နေသလိုတော့ ခံစားမိသားဗျ။)
ဒါ့အပြင် လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်မှာ Galaxy ဖုန်းတိုင်းရဲ့ အဖော် ringtone လေးဖြစ်တဲ့ “Over the Horizon” ကိုတော့ 2018 version ထပ်မံထုတ်လုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်မှုအားကောင်းတဲ့ Samsung အနေနဲ့ရလဒ်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
(ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ link လေးတွေကိုဝင်ဖတ်ကြည့်ရင်အရာအားလုံးနားလည်သွားပါလိမ့်မယ် ?)
LG ဟာတော့ သူတို့ G seris ရဲ့နောက်ဆုံး model ဖြစ်တဲ့ G7 ကို MWC မှာမိတ်ဆက်သွားဖို့ အစီအစဉ်ချထားပေမယ့်လည်း အစီအစဉ်အတိုင်း မဖြစ်မြှောက်နိုင်တာကြောင့် G7 အစား AI feature ပါဝင်တဲ့ V30+α ကိုသာမိတ်ဆက်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။V30+α အပြင် K series ထဲက Mid-range စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ K8 နဲ့ K10 ကိုပါတစ်ပါးထဲမိတ်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းကိုတော့ မနေ့က LG ရဲ့ ကြေညာချက်အရသိရှိခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
K8 နဲ့ K10 တို့ရဲ့ Specification ပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုလစ်ပါ ? LG K8 & K10
Sony ရဲ့ MWC 2018 မှာမိတ်ဆက်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာကတော့ Xperia အမျိုးအစား စမတ်ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Xperia XZ2 နဲ့ Xperia XZ2 Compact တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Specification နဲ့ စျေးနှုန်းပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ? XZ2 & XZ2 Compact spec/price
Alcatel အနေနဲ့ကတော့ MWC 2018 မှာ alcatel 5, alcatel 3V, alcatel 1x အစရှိတဲ့ မော်ဒယ် ၃ မျိုးကို မိတ်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၄ ရက်နေ့မိတ်ဆက်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပေမယ့် MWC မှာ မိတ်ဆက်သွားဖို့ကပိုပြီးသေချာသလောက်ရှိပါတယ်။ 5, 3V, 1x အစရှိတဲ့ မော်ဒယ်တွေအတွက် ပုံရိပ်သာထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး Specification ပိုင်းကတော့ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
Samsung Galaxy S9, S9+/ LG V30+α, K8, K10/ Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact/ Alcatel 5, 3V, 1x အစရှိတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေဟာတော့ MWC အတွက် ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ MWC 2018 မှာ မိတ်ဆွေမျှော်လင့်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းကိုလည်း အောက်ပါ cmt မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။
Alcatel, Android, LG, Samsung, Sony